Facebook | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
August 15, 2018 · 2:01 pm
ပုဇွန်တောင် သံလမ်းမရောက်ခင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ရှေ့က မီးပွိုင့်ထောင့် ရောက်ရင် ကြည့်ပါ … ဘယ်သူ့မှ လူမထင်တဲ့ ခွေးလေခွေးလွင့်တွေ တွေ့ပါလိမ့်မယ် … ကားလမ်းလယ်ခေါင်တက်ပြီး တစ်ဖက်လမ်းက ခွေတွေကိုရော … သူတို့ကို ကြောက်မယ်ထင်တဲ့ လူတွေကိုပါ အမြဲ ရန်ရှာပါတယ် …
တစ်ရက်မှာ ကျနော်တို့က မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတယ် … အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ကလေးတစ်ယောက်ကို တွန်းလှည်းထဲထည့် … နောက်ကလေးလေး တစ်ယောက်က လမ်းလျှောက်ပြီး မအေ့နောက်နားက လိုက်လာပါတယ် …
အမျိုးသမီးက ကျနော်တို့ ဘေးဝိုင်းက အသိကို လက်လှမ်းပြရင်း ကားလမ်းကူးဖို့ စိတ်စောနေပါတယ် … သူ့နောက်မှာ ခွေး ၄ ကောင်လောက်က တွန်းလှည်းက ကလေးဆီ ပြေးလာပါတယ် …
ကျနော်တို့ဆိုင်က ဝိုင်းတွေရယ် … ဘေးက ဆိုင်က လူတွေရယ် ထပြီး အော်ကြဟစ်ကြမှ ခွေးတွေ ပြန်လှည့်ပြေးပါတယ် …
လူတကာ ကျွေးတာတွေ စားပြီး ခွေးပါးဝတဲ့ ခွေးတွေကို သိပ်ချစ်နေကြရင်လည်း သွားခေါ်ပြီးသာ မွေးကြပါ …
Filed under Facebook, Health
Tagged as Facebook, Health
April 19, 2018 · 3:28 pm
based on unverified information
မစ္စ ယန်ဟီးလီ မိုင်းနင်းမိခြင်း …
SR’s comment on social media. An example of making public statements and reports based on unverified information. She #shared #wrong #information.
crd: Zaw Htay/facebook
Filed under Facebook, Politics
Tagged as Facebook, Politics
March 29, 2018 · 4:35 pm
(၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလမှာ ရေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီ သတင်းဌာနကလည်း ထပ်ဆင့် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။)
Facebook ဆိုတာ Social Network ပါ
Social ဆိုတာ လူမှုရေးရာ Network ဆိုတာ ကွန်ရက် အသိုင်းအဝိုင်းဆိုတော့ Social Network ဆိုတာ ခပ်လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ လူမှုကွန်ရက်ပါ။ ဒီလူမှုကွန်ရက် ပါဝင်ပြီဆိုရင်တော့ သူ့အရပ်သူ့ဇာတ် သူ့အထာလေးတွေရှိတယ်။
အဲ့ဒီ အထာလေးတွေကို အထာကျပြီဆိုမှ လူမှုကွန်ရက်ထဲကို ဝင်လာပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ လူရယ်စရာ ဖြစ်ပြီး ဂွမ်းစိန် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၁။ ပထမဆုံးက လူမှုကွန်ရက်လောကနဲ့ လက်တွေ့ဘဝကို ခွဲခြားထားပါ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်တွေ့ဘဝမှာ ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ပေမဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ လူလတ်ပိုင်းလုပ်လို့ရတယ်။
အပြန်အလှန်ပဲ လူကြီးပိုင်းအရွယ် ဖြစ်ပေမဲ့ လူငယ် လူလတ်ကြိုက်တဲ့ဘဝကို ရွေးလို့ရတယ်။
လက်တွေ့မှာ အလုပ်အကိုင် မရှိသော်လည်း လူမှုကွန်ရက်မှာ ရာထူးကြီးကြီး ယူထားလို့ရတယ်။
Filed under Facebook, Social Network
Tagged as Facebook, Social Network
March 28, 2018 · 4:14 pm
ဦးဝင်းမြင့် သမ္မတ ရွေးကောက်ခံရခြင်းကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက လျင်မြန်စွာ လွန်ခဲ့သည့် ၁ နာရီခန့်တွင် ခမ်းနားစွာ ss ရိုက်ပြီး သေသပ်စွာ ရေးသားတင်ဆက်ထားစဉ် …
Filed under Facebook, Journalism, Media
Tagged as Facebook, Journalism, Media
September 2, 2016 · 1:38 pm
(Credit – dreamstime)
-တဖက်က ပြောတယ်-ဝ တွေ ခွဲခြားခံရတယ် … ဘာညာ
-ကျန် တဖက်က ပြောတယ်-ဝင်ခွင့်ကတ်တွေ EAOs က ထုတ်သွားလို့၊ ဝ ကလည်း တည်းရန် စီစဉ်ပေးရာတွင် မတည်း၊ တခြားနေရာ တည်း၍ ကတ်များ တလွဲရောက်၊ ဝ ကို အကျအန ဖိတ်တာတောင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်း မလာ၊ တာချီလိတ် တာဝန်ခံ အဆင့်သာ လာရောက် … ဘာညာ …
-တဖက်က ပြောတယ်-သူတို့က ရေဆေးပန်းချီ အသင်းက ဘာညာကွိကွတဲ့ … နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ပွဲများ ဝင်ရောက် ဆယ်မီနာ ရာမီနာလုပ် … ဘာညာ
-ကျန်တဖက်က ပြောတယ် …ရေးဆေးမရေးတဲ့လူတွေက ဘယ်က အဲဒီထဲ ပါလာတာလဲတဲ့ …